एकतामा माअोवादीलार्इ साह्रो, एमालेलार्इ गाह्रोः गति लिँदा लिँदै हलो अड्कियो | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more एकतामा माअोवादीलार्इ साह्रो, एमालेलार्इ गाह्रोः गति लिँदा लिँदै हलो अड्कियो
एकतामा माअोवादीलार्इ साह्रो, एमालेलार्इ गाह्रोः गति लिँदा लिँदै हलो अड्कियो
माघ २२ गते, २०७४ - ०९:०८
काठमाडाैं । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले पार्टी एकता गर्ने भनिएको मिति ५ महिना नाघिसकेको छ । यो बीचमा एकतालार्इ निष्कर्षमा पुर्याउन थुप्रै बैठक भए, कतिपय ‘वान टु वान’ बैठक भए । प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको चुनाव लगत्तै गर्ने भनिएको एकता ढिलार्इ हुँदै अहिले सरकार गठनपछि मात्रै भन्न थालिएको छ । मुख्यत एकता हलो कहाँ अड्कियो अझै सार्वजनिक हुन् सकेको छैन् ।
नेपालमा राजनीतिक गर्मी सुरू भएकै बेला केहि दिन अघि मात्र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाल भ्रमणमा अाइन् । उनले प्रमुख पार्टीका अध्यक्षदेखि, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्मलार्इ भेट गरिन् । कसैसँग लञ्च गरिन त कसैसँग डिनर । योबीचमा उनले ‘वान टु वान’ छलफलसमेत गरिन् । तर उक्त छलफलमा बधाइ तथा शुभकामना दिएको र नेपालसँग काम गर्न इच्छुक रहेको मात्रै बताइएको छ । भित्रि कुरा बाहिर अझै केहि खुलेको छैन् ।
माओवादीका नेताहरूले प्रधानमन्त्री वा एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष नपाए नेकपा एमालेसँगको एकता असम्भव भएको बताउन थालेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगको छलफलपछि आइतवार चितवन पुगेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग कुराकानी गरेका सचिवालय सदस्य नारायण दाहालले एउटा पद पनि छाड्न एमाले अनिच्छुक देखिएको जनाएका छन् ।
अघिल्लो शनिवार चितवनमा ‘केही दिनभित्रै एकताबारे निर्णायक कुरा गर्ने’ बताएका प्रचण्ड ओलीसँगको वार्तापछि चितवन पुग्दा उनीसँग सुनाउने कुनै निर्णायक सन्देश थिएन । ओलीसँगको भेटबारे प्रचण्डसँग कुराकानी गरेपछि नेता दाहालले भने, ‘एकताको गति अघि बढेको तर त्यसले समात्नु पर्ने गति नपकडिएको बताए ।’
प्रचण्डले ‘पार्टी एकता रोक्ने र वाम गठबन्धन तोड्ने ठूलै षड्यन्त्र भइरहेको’ विगतको धारणा पुन: दोहर्‍याएका छन् । कतिपयले त्यसलाई एमालेले प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष कुनै छाड्न नमानेपछिको प्रचण्डको असन्तुष्टिको संकेत ठानेका छन् । त्यसबारे सचिवालय सदस्य दाहालको भनाइ थियो, ‘करिब-करिब त्यस्तो देखिन्छ । एमाले नेतृत्वले गाह्रो मानेको देखिन्छ । तर त्यो असम्भव हो ।’
ओली र प्रचण्डबीच एउटाले सरकार र अर्कोले पार्टी नेतृत्व गर्ने भद्र सहमति भएको उनको दाबी छ । प्रचण्ड स्वयम्‌ले त्यो कुरा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
प्रचण्डले दिएको जानकारीका आधारमा उनले त्यो दावी गरेका हुन् ? जवाफमा नेता दाहालले भने, ‘भाषणमा भन्नु भयो कि भएन् अर्को कुरा हो । तर हामीसँगको भएको अनौपचारिक छलफल अनुसार भन्दा सरकार र पार्टीको नेतृत्व एक-एकजनाले गर्नु स्वाभाविक हो । मेरो विचारमा पनि त्यो भएन भने त के सम्भव हुन्छ र ? एकता भनेको पार्टी विलय त होइन नि ।’ चुनाव प्रचारका क्रममा दुवै दलको नेतृत्व तहबाट थोरै समय नपुग भएकाले चुनावी गठबन्धन बनाएको भनाइ सार्वजनिक भएको थियो ।
चुनावपछि एकता गर्ने घोषणा गरेका उनीहरुबीच पटक-पटक एकल वा सामूहिक छलफल भए पनि उनीहरु तत्काल एकताको विन्दुमा पुगिसकेको देखिएको छैन ।बरु दिन दिनै झन् अन्योल बढेको पाइन्छ । तर दुवै पक्षका नेताले एकता हुने बताइरहेका छन् ।
एमाले–माओवादी एकतापछि पार्टीको नाम यस्तो राख्ने
सुत्रधारले नै गरे एमाले–माओवादी एकता नहुने खुलासा
माघ २२ गते, २०७४ - ०९:०८ मा प्रकाशित